cuisine Japanese - kuyinto ukudla abantu abafuna ukuphila isikhathi eside. Ukudla waseJapane emhlabeni iyindinganiso umsoco ofanele. Esinye sezizathu okwesikhathi Ukuvalwa eside yelanga eliphumayo kusuka emhlabeni - kuyinto yindawo elikuyo. Ubethula kakhulu kunqunywa engavamile amandla izakhamuzi zakhona. Yini igama ukudla Japanese? Kuyini okwakhe yayo? Ufunda kusuka sihloko!
ukudla Japanese - akusiwona kakhulu okwakhe izithako of ukudla ngakunye, njengoba emakhulwini eminyaka ngezindlela efakazelwe ukulungiselela uphake. Ukubhekisisa imininingwane - yilokho isici esiyinhloko imfihlo futhi ehlukile cuisine Japanese. Ngikwazisa yonke imininingwane ehilelekile, isiko kanye umthetho. ukudla Japanese ibhalwe kuphela imikhiqizo fresh, ngakho zonke dish - kungcono ingxenye umjikelezo wemvelo, ukuqhubeka umcabango ushintsho kwaphakade zonyaka.
Ukukhonza kanye ukukhonza izitsha
Mhlawumbe akekho ekhishini zomhlaba bamshaya indiva kangaka kuya ekukhonzeni izitsha kanye ithebula kulungiselelwa, like in Japanese. Beauty and Minimalism - kungcono inhlanganisela ukuthi unesikhathi yokudlela izitsha bendabuko ezakheke ehlukahlukene, izinto zokwakha kanye osayizi. ukudla Japanese ine izimfanelo efanayo izitsha: isibonelo ecacile - kuba sushi futhi sashimi, futhi imihlobiso yabo - amaqabunga, izimbali, utshani. ipuleti ngamunye izibiliboco Japanese - wobuciko kweqiniso.
imikhiqizo ukudla Japanese
Ukushintsha zonyaka umbani kubonakala ethebuleni abakhileyo ngokusagolide lapho ilanga liphuma. Ngemva ukwelashwa ukushisa nokulungiselelwa isithako ngamunye liyadingeka silondoloze ukuthungwa yayo engokwemvelo nombala. Iphunga kuphela kugcizelelwe izinongo eziningi futhi seasonings.
Ikhishi of Japan libhekene kulondolozwe yemifino ukunambitheka, inhlanzi, inyama, izithelo, inhlanzi, Tofu kanye neminye imikhiqizo ngendlela engokwemvelo.
The main isinongo - a sauce soy kanye miso, okuyinto zenziwa ngobuchwepheshe bendabuko. Ahluke umbala kanye ukunambitheka, ekhona ezinguqulweni ezintathu zezinhlayiya eziyisisekelo.
ukudla Japanese - lena ngokuyinhloko irayisi. Kuyinto isithako ezinkulu ekhishini zaseJapane siyingxenye ye ukudla kakhulu.
Eminyakeni engaba ngu-150 edlule, abantu of Japan wesaba imikhiqizo inyama. ikhishi yabo yesimanje namanje ngokuyinhloko kwasolwandle kanye izitsha, okuyinto uzilungiselele kusuka imikhiqizo soy bean, ezifana yuba, Tofu, natto, miso isobho kanye soy sauce.
A indima ebalulekile eyadlalwa izithako fresh ekuphekeni Japanese. Ngokwesibonelo, imifino, ukudla kwasolwandle kanye amakhowe, iqoqo okuyinto incike isikhathi sonyaka iwindi. Ngaphezu kwalokho, ngamunye izifunda of Japan, kukhona amakhono endawo, okuyinto bejabulela nako eTokyo.
ukudla Japanese, okuvame igama kunzima kakhulu ukukhumbula asho, ngokubaluleka kuthandwa eRussia. Manje sizokutshela kabanzi mayelana zona lezo zitsha ukuthi bayajabula ukudla e-Japan.
ukudla Japanese, okuyinto uhlu wehlukile kakhulu, naphezu isethi elinganiselwe kakhulu izithako, ube esilindele ka gourmets eziningi abalandeli angavamile. Ekhishini yaleli zwe inezinkulungwane zokupheka, sihluke nomunye. Thina ngikuxoxele ezinye zazo.
Udon ibizwa ngokuthi uhlobo kakolweni noodle, ingxenye engasebenzisi i iqanda. Ezimweni eziningi, Udon wakhonza hot njengoba noodle isobho umhluzi.
Soba - kungcono noodle ezenziwe ufulawa nokunye okufana nokolweni lemicu empunga elinamathela othini onsundu umbala. Ezimweni eziningi enikeziwe ifomu abandayo ngaphandle umhluzi.
Sushi - isidlo yendabuko ngaselangeni njengoba liphuma, okuyinto okulungiselelwe kusuka ezihlukahlukene kwasolwandle nelayisi.
Sashimi, sashimi, noma - omunye izitsha kazwelonke cuisine Japanese. Ngaphansi kwalo "esibi" igama lutho kodwa amanga njengoba nezibopho of izinhlobo ezihlukene zezinhlanzi, okuyinto uthathe yizicucu amancane. Ngezinye izikhathi asetshenziswa nokunye ukudla kwasolwandle. Fish wadalula sakugcina ukwelashwa ukushisa noma wakhonza eluhlaza. Waba wasabi, ginger soy sauce.
Miso isobho - isidlo kazwelonke cuisine Japanese. Njengoba yenziwe kusukela wakame izimila zasolwandle, onion, miso (inkinobho yomcibisholo wokuphenya nokunamathisela) , kanye aburaage.
isidlo Japanese inkukhu okuyigugu ne viscera, okuyinto ngosile phezu namalahle on skewers benziwe ngoqalo - kuyinto yase-Yakitori. Lokhu dish is wakhonza noma kuphela ngosawoti noma usoso "taare" eyenziwe usoso wesoya, ushukela kanye mirin. Kulokhu, usoso inyama kuthululwe, ethosiwe kuze ngomumo bese wapha, wathela sauce efanayo. Kwesinye isikhathi lokhu dish is wakhonza ne kalamula. Yase-Yakitori isidlo ethandwa kakhulu Japanese.
Ungadla Japanese futhi ezihlukahlukene kakhulu.
ethandwa kakhulu eJapane ukudla - takoyaki - ezenziwe kusukela izingcezu ingwane futhi Batter. Ethosiwe isidlo epanini ekhethekile, okuyinto has ikhefu hemispherical.
Takuan - akusona isidlo esingaphansi ethandwa bendabuko e-Japan. Ilungiselela ke kusukela daikon isithombo.
labapheki European banezela izinongo kanye namakhambi esitsheni ngesikhatsi ukupheka. A Culinary Japanese ukuzisebenzisa kuphela isidlo uzilungiselele atholwe ezengeziwe ukunambitheka noma iphunga umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ungakwazi ufafaze izinongo ukudla, kodwa ungakwazi ukwengeza ukuba sauce for ekushoniseni.
I condiment edume kunazo yelanga eliphumayo - a-ginger, wasabi futhi shiso. Ngaphandle kwabo, labapheki Japanese ukusebenzisa futhi ezihlukahlukene utshani zasendle, ababiziweyo Sansan. Ngamunye wabo ukunambitheka esiyingqayizivele kanye izimfanelo elimnandi.
Gary uhlobo imifino pickled - tsukemono. Lena ginger abasha, thinly lisikiwe, okuyinto kulolo ketshezi ushukela uviniga.
Gary kunobuciko eyinqaba okubabayo, okuyinto ivame ukuhlotshaniswa ngamakha. Ivame wakhonza sushi nge sauce soy kanye wasabi. Gary kuyadingeka ukuze ukubulala aftertaste ngemva kokuhambisa eyodwa uhlobo umhlaba kwenye. Asikho isidingo Ziningi ginger, noma Gari - izingcezu ezincane ngokwanele. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa ucezu ginger njengoba ibhulashi ukuba gcoba sushi nge sauce soy.
ukudla Japanese izingane - kuyinto wokuqala nomkhulu kunabo bonke Yiqiniso, nama-dessert kanye amaswidi. Abapheki of Japan ibhalwe kusuka ezihlukahlukene amnandi amajikijolo, izithelo nokusanhlamvu, futhi ubisi nemikhiqizo yalo. Ilayisi eJapane ngisho esetshenziselwa nama-dessert.
Elimnandi compulsorily fed itiye eliluhlaza ngaphandle ushukela. Lokhu isiphuzo kwenza kube nokwenzeka ukuba ujabulele ukunambitheka amaswidi, ukuyivula ngokugcwele.
Omunye kophudingi ethandwa kakhulu eJapane - ke wagashi, bendabuko amaswidi Japanese. Lapho yokupheka wabo zisebenzisa fresh kuphela, izithako zemvelo ezifana nobhontshisi, irayisi, ubhatata, chestnut, ezihlukahlukene amakhambi zezinkambi.
I-Japanese kakhulu othanda izithelo ezihlukahlukene kanye berry neziphuzo ezibandayo. Kodwa ayimpoqo kanye othandekayo kakhulu lapha, yebo, ingabe itiye. EJapane, lesi siphuzo akuyona ukwenziwa teapot ezincane nezinkulu-bellied, kodwa khona kanye elilezinkemba lezinduku, livela lapho baphuze.
Chaevniki Japan zithi isikhathi esingcono ukuphuza itiye - ngalesi sikhathi emva kwamaminithi ambalwa ngemva yokuphisa isiphuzo. Lapho itiye amahlamvu basonta kuthiwa waqonda, bese ukhetha ukunambitheka itiye. Lesi sakamuva singabangela liyokwahlulelwa umbala isiphuzo: umbala ogqamile brown.
ukudla Japanese kusukela powder
Lokhu okusungulile yamuva kwabakhileyo ngokusagolide lapho ilanga liphuma. Ukudla isethi siqukethe izithako in ifomu powder. Ngokwesibonelo, waffles ne jam libukeka isikhwama okuqukethwe, okumele buhlanjululwe ngamanzi ukwakha inhlama ujamu ukunonga okwehlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, kukhona isikhunta wokubhaka waffles. ukudla Japanese powder elinye ukudla ukudla kwamanye amazwe.
Indlela ukususa isikhumba Pike: izindlela eziphumelelayo ambalwa
"Ikotishi" (ukhilimu): izinhlobo, okuyinzuzo yangempela umzimba
Kungani uhlangothi lwesobunxele lulimaza? Ingabe lubi kakhulu?
Ngokuphathelene nomuthi "i-Vigantol": imiyalo yeziguli
Ukudla Ducane. Ezenye nokubuyekeza trialled
Ingabe Kungenzeka ukunciphisa umzimba nge egijima futhi indlela yokukwenza?
Casserole nge inyama nengulube ku multivarka - esheshayo isidlo esilula kwasemini eqotho
Indlela ukuqeda isikhunta emiphongolweni? iseluleko esihle
Amaholide eVietnam anezingane: amathiphu nezeluleko. Ukubuyekeza mayelana nakho konke okuseVietnam nabantwana
Bangaki butterfly amaphiko? Bangaki namabhuzu IZIMPIKO zovemvane?
Ukwenza Imali Isihlahla zemali